Iyo nyowani vhezheni yeLibreoffice 6.2 inosvika pamwe nekuvandudzwa kutsva | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeLibreoffice 6.2 inosvika pamwe nekuvandudzwa kutsva
Iyo Gwaro Sisekelo munguva pfupi yapfuura yakazivisa kuburitswa kweLibreOffice 6.2 hofisi suite. Kune avo venyu vasati vaziva LibreOffice, Iyi hofisi suite iyo ine akati wandei zvirongwa mukabhuku yayo.
Pakati peavo vatinowana Munyori anoitirwa kugadzirisa zvinyorwa uye kuvandudza, Calc ispredishiti software, yakafanana neMicrosoft Excel, Impress yakanangana nekubata mharidzo uye masiraidhi, Base chirongwa chinotibvumidza kugadzira uye manejimendi edhatabhesi.
LibreOffice ndeye Office suite yemahara, muchinjika-chikuva uye yakavhurika sosi saka tinogona kuishandisa muLinux pamwe neWindows uye Mac OS.
Iyo inogara ichivandudza rutsigiro kune yechitatu-bato mafaera marudzi (kusanganisira mafomati matsva uye ekare eHofisi) zvinoreva kuti hausi kubviswa kubva kumaindasitiri zviyero, nepo muchinjika-chikuva chekutsigira zvichireva kuti unogona kumhanya LibreOffice paWindows, Mac, kana Linux pasina kudzidzirazve nzira itsva yekushanda.
1 Chii chitsva muLibreOffice 6.2?
2 Nzira yekuwana sei iyi vhezheni itsva yeLibreOffice 6.2?
Chii chitsva muLibreOffice 6.2?
Mukuburitswa kutsva kweLibreOffice maviri matsva eVCL plugins akakurudzirwa: qt5, iyo inobvumira kuunza iyo LibreOffice interface kune yakajairika maitiro eQt application uye kde5 ine zvikamu zvekubatanidzwa neKDE Plasma 5 desktop (iyo kde5 plugin inoenderana neqt5 plugin).
Kana uchibatanidza iyo module yeiyo interface, iyo Qt 5 uye KDE Frameworks 5 maraibhurari anoshandiswa.
Iyo VCL subsystem (Visual Zvikamu Raibhurari) inobvumira kuburitsa LibreOffice dhizaini kubva kwakasiyana maturusi ekushandisa, inopa mukana wekushandisa dialog mabhokisi, mabhatani, mahwindo mafuremu uye ekuzvarwa majeti ega ega graphical nharaunda.
Semuenzaniso, kana uchibatanidza ne kde5 plug-in, ma dialog echiKDE anoshandiswa kuvhura mafaera uye kufamba dhairekitori zviri mukati, KDE system yepasi rose menyu uye menyu inopa, akawanda-monitor marongero, clipboard, uye yekudhonza nekudonhedza michina.
Nepo iyo qt5 plugin inotsigira kudhirowa kuburikidza neQPainter (nekusagadzika kana ichishandiswa zvakasiyana) uye nerubatsiro rweCairo raibhurari (nekusagadzika paunenge uchishandisa kde5 plugin, shanduko yenharaunda inogona zvakare kugoneswa SAL_VCL_QT5_USE_CAIRO).
Tsigiro yeiyo yekare Qt4-yakavakirwa VCL module uye KDE4 tekinoroji ichamiswa mukuburitswa kunotevera.
Mune iyo default pani, widget nyowani inokurudzirwa kuisa akakosha mavara. Yakagadziridzwa dhizaini
Kune ese maapplication, marongerwo emirairo anoratidzwa zvinoenderana nemamiriro ekunze akabatana.
Mabhatani ekugamuchira kana kuramba shanduko dzese akawedzerwa papanera nemirairo yekutevera shanduko.
Akawedzerawo seti nyowani dzekuyedza zvidhori muSVG vector fomati, inowanikwa mumataera matatu: Breeze, Colibre uye Elementary.
Nekumisikidza, PNG mafomati icons anoshandiswa sekare. Iko kuiswa kwevector icons kunoitwa kuburikidza nemenyu "Zvishandiso / Sarudzo ... / LibreOffice / Tarisa ne (SVG)".
Iyo yekutanga raster glyph seti yakawedzerwa nerutsigiro rwemakumi matatu-pixel saizi (kuwedzera kune yaimbove iripo 32-pixel uye 16-pixel saizi).
Izvo zvikamu zvakagadziridzwa kuti zvigadzire mushandisi interface. Yakawedzera zvakanyanya kuita uye kugadzikana kweiyo interface yekugadzirisa dialog ("Zvishandiso ▸ Sarudzo ▸ LibreOffice ▸ Personalization").
Ese mamenu ezvinyorwa akagadziridzwas, iyo kuumbwa kwayo kwave kuenderana uye kufembera kune akasiyana LibreOffice application.
Yakawedzera tsigiro yekuvharidzira zvinyorwa zveOOXML (Agile encryption) uchishandisa iyo AES-256-CBC algorithm ine SHA512 hash basa, pamwe nerutsigiro rweHMAC ongororo yekuona kuti gwaro rakachengetwa ndiani.
Nzira yekuwana sei iyi vhezheni itsva yeLibreOffice 6.2?
Akagadzirira kuisirwa mapakeji akagadzirira kwakasiyana Linux, Windows uye macOS kugovera, pamwe nevashandi vekudhirowa kwepamhepo vhezheni kutumirwa paDocker.
Kuti uwane iwo mapakeji anoenderana nehurongwa hwakoIwe unogona kuzviwana nekuenda kune iyo suite's yepamutemo webhusaiti uye mune yayo yekurodha chikamu iwe unowana inoenderana zvinongedzo. Batanidzo ndeichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeLibreoffice 6.2 inosvika pamwe nekuvandudzwa kutsva
Ubuntu 14.04 LTS inosvika kumagumo ehupenyu hwayo muna Kubvumbi 30, 2019
Nhema Mesa: tevera kufambira mberi ...